zifammyanmar | Testimonyzifammyanmar
+95 1 544467
Zifamဆိုတာ ၁၇ နှစ်လောက် လက်တွဲခဲ့တဲ့ second family ပါ။ ကျွန်မအတွက်တော့ အောင်မြင်မှု ဆိုတဲ့ မှတ်တိုင်တွေထက် family member တွေ အားလုံးရဲ့ ရင်းနှီးမှု၊ နားလည်မှု၊ ယုံကြည်ကိုးစားမှု နဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကပိုတန်ဖိုးထားရတဲ့ အရာတွေပါ။
I feel very much blessed to be an employee of Zifam. We may have different points of view in any issues but at the end, we always achieve our goals and better solutions by cooperating and helping each other under the name of teamwork. That is the culture of Zifam that I love the most. I hope both Zifam company and all its employees grow stronger together towards better future.
Zifamရဲ့ အထူးခြားဆုံးကတော့ Job Secruityရှိတယ်။ မြန်မာပြည် Operation က ပင်မရေသောက်မြစ် နဲ့ ပင်စည် ဖြစ်နေလို့ပါ။ 2007-2008 တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ economic recession ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တွေကအလုပ်ပြုတ်သွားမှာကိုသိပ်ပြီးစိတ်မပူခဲ့ရပါဘူး။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အတွေးနဲ့ ပုံဖော်ခွင့်ရနေတာပါပဲ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ။
I haveagood working environment in my office andastrong family spirit also.
I love my job as I can provideaquality health care product and service and contribute toabetter quality of life for my community.
Zifam Company မှာလုပ်သက် ၆နှစ် ရှိပါပြီ။
ကျွန်တော်ဟာလွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ လူငယ်ဘ၀ကနေ ကျောင်းပြီးလို့ ပထမဆုံးZifam Company မှာ အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်ချိန်တွင် အခက်အခဲများ၊ အတွေ့အကြုံများရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအခက်အခဲအတွေ့အကြုံများဖြစ်ပေါ်ရင်ဆိုင်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကို Company ဟာမိသားစုစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ဖေးမကူညီလက်တွဲခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်Zifam Company ဟာ ၀န်ထမ်းတွေကို အရမ်းကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင် တွန်းပို့ပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကိုကျေနပ်မိပါတယ်။
0103, Dagon Tower, Shwe Gon Dine Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
95 1 558 248
+95 1 544 467, 544 483, 558 950, 554 524
© Copyright 2018. Zifammyanmar. All Rights Reserved. Powered by Ideal Technology.